Linux Lite 5.4 ine mwero yekudzokorora yakavakirwa paUbuntu 20.04.2 | Linux Vakapindwa muropa
Mwedzi mishanu mushure me previous version, timu yevanogadzira kuseri kweichi chakareruka kugovera akakanda LinuxLite 5.4. Zvinotoshamisa kuti vatanga sei kuburitsa chinyorwa: vanoti ine mwero iyo inosanganisira yekuvandudza kubhuku rekubatsira uye kugadzirisa mune akawanda mapakeji, uye chinondirovesa ndechekuti ivo vanotanga neiyo sumo kana iri izvo zvavanowanzo ita pane kuburitswa kwese system yako yekushandisa.
Izvo kushamisika padivi, Linux 5.4 yasvika zvichibva paUbuntu 20.04.2, inova yechipiri yekugadzirisa yekuvandudza yeazvino LTS vhezheni yeanoshanda system yakagadziriswa neCanonical. Kune rimwe divi, ivo vatora mukana wekuvandudza mamwe mapakeji, pakati payo iyo yazvino kernel isina kubatanidzwa, asi yakagadziridzwa kuti iise epazvino ekuchengetedza mabara.
Pfungwa dzeLinux Lite 5.4
Linux 5.4.0-70. Linux 5.11 inowanikwa kubva kune ayo ekuchengetedza.
Kubva paUbuntu 20.04.2, ine yayo vhezheni yeXfce 4.14.
Kunatsiridzwa mumenu yekubatsira, uko iko zvino kunotsanangura maitiro ekuisa software neiyo terminal.
Ikozvino pane gumi mapikicha matsva.
Mazhinji mamwe ma tweaks emukati nekuvandudza.
LinuxLite 5.4 ikozvino iripo kubva purojekiti yekurodha pasi peji rewebhu, iyo yatinokwanisa kuwana kubva Iyi link. Vashandisi varipo vanogona kuisa iyo yekuvandudza kubva kune imwecheteyo inoshanda sisitimu; iyo itsva ISO ndeye zero kumisikidzwa sezvo 5.4 ndiko kusunungurwa kwechitatu mune 5.x nhevedzano yeLinux Lite.
La inotevera vhezheni ichave yatove Linux 5.6 uye ichasvika pakati-2021.Kana vakafunga kuivhura neyakafa nguva ino seino nguva, inoita kunge ingangoitika, inosvika zvichibva paUbuntu 20.04.3, yekuvandudza poindi iyo yakarongerwa pakati paAugust. Zvikasadaro, izvo zvatichava nazvo kumwe kuvhura kune mwero, kunze kwekunge vadhonza ace kumusoro kwavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Lite 5.4, ine mwero yekuvandudza inoitika kuve yakavakirwa paUbuntu 20.04.2 uye inogadziridza mapakeji